Ọnọdụ maka oge okpomọkụ a 2022 | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 06/06/2022 10:25 | Emelitere ka 07/06/2022 12:57 | Akpụkpọ ụkwụ, Nlekọta onwe onye, ejiji, Ụdị
Oge okpomọkụ a anyị nwere nnukwu kasị mara na jụụ iche iche maka afọ a 2022. Ị gaghị atụ uche nkasi obi, na t-shirts dị larịị ma jiri nwayọọ nwayọọ mechie na agba dị mfe. Site n'ahịrị na-akpalite nkwado gburugburu ebe obibi yana ihe sitere na organic, ha na-adaba mgbe niile na usoro maka oge okpomọkụ 2022 a.
N'akụkụ a anyị nwere akara ngosi usoro Pedri Gonzalez maka Springfield, nke maka oge a, na-enye aka na-ewu ọdịnihu, na uwe ndị sitere na ihe ndị a na-emegharịghachi na nkà na ụzụ nke na-enye ohere ịchekwa mmiri, ike na kemịkal. Na-abawanye mbọ ma na-eche banyere nkwado nke mbara ala.
Usoro nke oge okpomọkụ a na-agụnye ọtụtụ uwe egwuregwu, na-anya isi na ọ bụ dị mfe karịa n'oge gara aga na ihe ndị ahụ dị mkpa na-eji dị ka uwe nkịtị na nke isi. Mbipụta ahụ enweghị ike ị ga-efu, dịka nke ọkụ, iku ume na karịa akpụkpọ ụkwụ dị mma niile. Anyị na-enyocha obere nuances na-akọwapụta ihe ọ bụla:
1 Bermuda mkpirisi ruo n'ikpere
2 Osisi ndị ahụ
3 Na-awụlikwa elu
4 Ogologo ogologo
5 Uwe elu
6 Akpụkpọ ụkwụ
Bermuda mkpirisi ruo n'ikpere
Shorts bụ ndị na-emeri mgbe niile n'oge okpomọkụ. Na oge gara aga e nwere preilection maka obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ, mana afọ a a na-achọ itule. Ha pụta ìhè na ukwu akpa uwe ogologo ọkpa, maka nkasi obi ahụ ọzọ, na ogologo nke ruru ikpere, na-enweghị gafere ha.
Ihe mejupụtara nke ọ nzọ bụ gbatịa akwa denim, A na-eji uwe ogologo ọkpa ajị anụ mee 100% owu na obere mkpirisi dị oke ọkụ, na nylon na spandex.
Oge okpomọkụ a na-agba mbọ na tank n'elu, ejiri eriri mee ya na ọtụtụ ndị ọzọ nwere obi ike. Ma dị mfe, na-adaba mgbe niile, t-shirts dị mkpụmkpụ nke sitere na ihe eji emegharị ka a na-ahọrọ. Nke agba mgbe niile na-anọpụ iche na dị nnọọ iche, emegharịrị maka ụdị ụtọ ọ bụla, nwere ụdị mbipụta ma ọ bụ akara ngosi. Ụdị polo slim fit tMa ọ bụ na-ahapụ ya n'akụkụ, na-akọ a nkịtị, egwuregwu na mara ụdị uwe.
T-uwe elu Dị ka a n'ozuzu iwu, ha ga-enwe a akpa na nnukwu anya, iji mepụta ọtụtụ nkasi obi na ụdị. Echiche bụ ịmepụta silhouette ọhụrụ na nke rụrụ arụ, ọ bụ ezie na t-shirts na-egosi ahụ ma ọ bụ slim style .
Osisi ndị ahụ
Osisi enweghị ike na-efu efu, na-akụ mgbe niile maka ụdị ọ bụla. Emeela ya ọhụrụ na piqué ihe na-adaba adaba mgbe niile, obere aka na nke nwere eriri eriri kodak. Ọtụtụ mere na 100% owu na ihe ọhụrụ nke owu Owu ka mma, atụmatụ ọhụrụ iji megharịa akụrụngwa.
The sweaters enweghị ike na-efu maka ụbọchị ma ọ bụ abalị mgbe okpomọkụ anaghị eso. Ha kwesịrị inwe ahịrị ha, ebe ọ bụ na ha ákwà na-eku ume na organic owu, na nke dị oke mkpa. Agba nke oge a dị nnọọ pastel.
Uwe ọkpa na-ọkọnọ na na ebughibu dabara udi na nhazi nke akpa ise. Na akwa ndị na-ekwe ka ọsụsọ na-eme ya ma jiri nlezianya mee ihe. Anyị nwere ndị nwere ọdịdị wrinkled ma ọ bụ eyi na n'ụdị pụrụ iche, a na-eji ECO-WAH na-asa ya na laser.
uwe ogologo ọkpa chino Ha na-adị mgbe niile na usoro niile ma bịaruo onwe ha n'ọnọdụ dị ka uwe na-agbanwe agbanwe. ha nile nwere agba dị nro maka oge okpomọkụ a na akwa akwa dị ka okpomọkụ si dị na nkasi obi nke ịbụ ihe na-agbanwe.
Ndị China na-egosipụtakwa onwe ha ákwà linin, na ecru drawstring na n'úkwù na nkọwa nke iche eri na drawstring. Ha na-adị nnọọ mma ma na-ekpo ọkụ maka nzukọ okpomọkụ.
Ha enweghị ike ịgbaghara ndị na-agba ọsọ, mgbe niile nnọọ vasatail maka oge ọ bụla. Emere ya na eriri ngbanwe nwere eriri na eriri twill gbatịa. N'ime imewe ha enweghị ike ịgbaghara Akpa ibu akụkụ, ọ bụ ezie na emesia ha nwere mmechi bọtịnụ n'úkwù ya na zipa kwekọrọ.
Uwe elu Maka oge okpomọkụ a Ha nwere ogologo aka ma ejiri owu ma ọ bụ linen mee ya, ma ọ bụ ngwakọta abụọ ahụ, ka ha wee nwee ike iji ejiji na-enyeghị oke ọkụ. Ejiri ha mee ha kpochapụwo mgbe kwesịrị ekwesị ịkpụ, nke nwere mpempe akwụkwọ na agba dị nro dabara na ọcha. Obi abụọ adịghị ya, anyị nwere ike ịhụ ụdị agba dị iche iche, site na uwe elu na-acha ọcha na nke oji na ọtụtụ n'ime ha na-eji ejiji. ihe nkịtị, egwuregwu na ọdịdị mara mma.
N'ihi na oge okpomọkụ oge anyị na-enye ụzọ espadrilles, mere nke owu akwa na otutu nke agba siri ike na ogbi, iji kwekọọ na nhọrọ niile nke uwe okpomọkụ. Tukwasi obi naanị rọba na jute eke siri ike na akwa akwa iji dozie ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ.
Akpụkpọ ụkwụ obodo Ha enweghị ike na-efu, nke ejiri mee ya organic owu ihe na lined n'ime. A na-eji rọba na-eme ka mkpịsị ụkwụ na ikiri ụkwụ sie ike, na-enye ọdịdị ahụ mara mma na uwe ime obodo.
The Casual Skate Shoe Ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ọzọ dị mma maka ụbọchị ọkụ. A na-eji owu mee ha ma nwee àgwà agbakwunyere. otu ibe nwere mmetụta akpụkpọ anụ na azụ. Ha nwekwara insole okwuchi eke na ọbụ rọba nwere ụda olu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Nlekọta onwe onye » Ọnọdụ maka oge okpomọkụ a 2022
Kedu otu nwanyị si ezobe na ọ hụrụ gị n'anya?